त्यसै बित्यो भूइँचालोपछिको एक वर्ष | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार त्यसै बित्यो भूइँचालोपछिको एक वर्ष
देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जनताका मनमा केही विश्वास र केही भरोसा उब्जिएका थिए । वैशाख १२ को भूइँचालोपछि ती टुटे । जनताको घरका भग्नावशेषमा पुरिए ती विश्वास र भरोसा ।
त्यतिबेला टेलिभिजनको पर्दामा देखिएको दृश्यले धेरैको मन विचलित तुल्याएको थियो । भूइँचालोपछि बसेको संविधानसभाको वैैठकबाट बाहिर निस्किदै गरेका सभासदहरुका हातमा पालका प्याकेट देखेपछि पंक्तिकारले टिप्पणी गरेको थियो – ओहो, यी त साँच्चै हरीप रहेछन् ।
भूइँचालोले घरबास भत्किएका गरीव नेपाली र उनका नांगा-भुतुंगा केटाकेटी घाम र झरी झेलेर भोकभोकै बाँचिरहेका बेला जन-प्रतिनिधि भनिने सुटेड-बुटेड पात्रहरु पीडितका लागि राहतमा आएका पालको प्याकेट बोकेर संसद भवन बाहिर निस्किँदै थिए । यो घीनलाग्दो दृश्य गतिछाडा राजनीतिको चरमोत्कर्ष थियो ।
सभासदहरुलाई, निश्चय पनि, भूइँचालोले नहल्लाएको थिएन । तर, कतिपय सभासदको आर्थिक हैसियत जनताका लागि राहतमा आएको पाल काखीमा च्यापेर हिँड्नुपर्ने थिएन ।
भूइँचालोको एक वर्ष बितेको छ । तर, सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेर राज्य चलाउनेहरुको मानसिकतामा एकरत्ति परिवर्तन आएको छैन । उनीहरुले विपदको त्यो क्षणलाई आफनो स्मृतिबाट हटाइसकेका छन् ।
नेपाली जनताले ठूला राजनीतिक विपत्तिहरु धेरै बेहोरेका छन् । बाढी पहिरोजस्ता विपत्तिमा उनीहरुको ज्यान सँधै जोखिममा पर्ने गरेको छ । यी विपत्तिहरुका वीच भूइँचालो नेपाली जनताले बेहोर्नु परेको यस्तो प्राकृतिक विपत्ति थियो, जसको परिधि व्यापक मात्र थिएन, विनाशक थियो । भूइँचालो मध्य नेपालमा केन्दि्रत भए पनि यसकोे प्रभाव देशव्यापी रह्यो । एउटै पनि नेपाली जनता यसको दूरगामी असरबाट मुक्त रहेन ।
भूइँचालोको मारमा परेर देशको केन्द्रविन्दूका रुपमा रहेको राजधानी काठमाडौं नै क्षत-विक्षत भएपछि देशभर त्यसको प्रभावको विस्तार हुनु स्वाभाविक थियो ।
राजधानी शहरको शानका रुपमा रहेको धरहरा नढलेको भए, गद्दी बैठक नभत्किएको भए र शासन-सत्ताको प्रतीकात्मक केन्द्रविन्दूूका रुपमा रहेको हनुमान ढोका दरबार परिसर क्षत-विक्षत नभएको भए भूइँचालोले जतिसुकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको भए पनि यसको महत्व सीमित हुने थियो । केन्द्रीकृत शासन-सत्ता भएको हाम्रो जस्तो देशमा मूल राजनीतिक वृत्त प्रभावित नभएसम्म कुनै पनि मानवीय दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले पाउनुपर्ने जति महत्व पाउँदैनन् ।
यतिबेला राजधानी काठमाडौं र यहाँको निर्णायक राजनीतिक वृत्त ०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूइँचालोको प्रभावबाट पूरै मुक्त भइसकेको छ । तर, सामान्य मानिसको मनबाट भूइँचालोको भय हटिसकेको छैन । अन्धविश्वासको व्यापार गर्ने ज्योतिष र जोगीहरु, धर्मको राजनीतिमा लागेका पण्डाहरु र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हल्ला फैलाउने असामाजिक समूहहरुले ठूलो भूइँचालोको भय फैलाउन छाडेका छैनन् ।
मानिसले थाहा पाउने गरी र थाहै नपाउनेगरी सानातिना भूइँचालो आउने जाने क्रम रोकिएको छैन । यसले गर्दा मानिस हतोत्साही बन्नु स्वाभाविक नै हो । जनताको मनमा रहेको यो भ्रम र भय चिर्न सरकार आत्मविश्वासका साथ लाग्नुपर्ने थियो ।
तर, वैशाख १२ गतेपछि झण्डै दुई साता भूइँचालोको भयले पालमा लुकेर सुरक्षित बसेका सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले भूइँचालोले जनतामा पारेका मानसिक असरकोे चिन्ता गर्नै चाहेनन् ।
अहिले उनीहरु यो एक वर्षको समयमा परेको भूइँचालोको चाप र तनावबाट पूरै मुक्त भइसकेका छन् । भूइँचालो पीडितहरुले विगत एक वर्षदेखि भोगिरहेको दुःख र कष्ट नेताहरुका लागि भूइँचालो स्मृति-स्तम्भको शिलान्यास र विभिन्न गोष्ठीको उदघाटनमा अनुदित भएको छ ।
भूइँचालो पीडित जनताका नाममा राजनीतिक स्वार्थको रक्षा गर्ने अवसर बनेको छ आजको दिन । पीडितप्रतिको फोस्रो सहानुभूति र कहिल्यै पूरा नगरिने वचनवद्धता राजनीतिक नेताहरुको सधैंको कमजोरी बनेको छ । भूइँचालो पीडितहरुको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । जनता यही राजनीतिक कमजोरीको जाँतोमा पिसिइरहेका छन् ।
भूइँचालोपछि देश-विदेश र छर-छिमेकबाट पीडित नेपाली जनताप्रति देखाइएको सदभाव र सदाशयता अपूर्व थियो । जस्तापाता र त्रिपालदेखि कम्बल र पालसम्म, खाद्यान्नदेखि पानीसम्म, दाताहरु पीडित जनताको प्रारम्भिक उद्धारका लागि ओइरिएका थिए ।
भूइँचालोले थिचिएका र पुरिएकाहरुको उद्धारमा सबै मित्रराष्ट्रका टोलीहरु जुटेका थिए । विस्तारै यो क्रम टुंगिनु नै थियो र टुंगियो । त्यसपछिको चरणमा भएको दाता सम्मेलनमा नेपालको पुननिर्माणका लागि दाताहरुबाट ७ अरब अमेरिकी डलरको प्रतिवध्दता आयो । भूइँचालोपछिको पुननिर्माणमा दाताहरुको राम्रो समन्वय र समझदारीपूर्ण व्यवहार गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको निकै प्रशंशा भयो । उनलाई सम्मानित गरियो ।
तर, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त सरकारले पुननिर्माण कार्यको प्रभावशाली नेतृत्व गर्न सकेन । सरकारमा रहेको सहयोगी दल एमालेले भूइँचालो पीडितलाई सक्षमतापूर्वक राहत दिन नसकेकोमा कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना गर्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठायो । कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत पुननिर्माण प्राधिकरणको गठनसम्वन्धी अध्यादेश अलपत्र पर्‍यो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा प्रस्तावित व्यक्तिले पदीय दायित्व लिनै पाएनन् ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसाग समन्वय नै गर्न सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको दुई लाख रुपियााले घर बन्छ भन्नु भ्रमको खेती गर्नुमात्र हो
दलहरुवीच भूइँचालोपछिको पुननिर्माणका लागि आवश्यक सहमतिमा गाँठो परेपछि संविधान निर्माणमा दलहरु केन्द्रित भए । राष्ट्रिय पुननिर्माण र संविधान निर्माण सँगसँगै जान नसक्ने विषय थिएनन् । राजनीतिक दलका नेताहरु संविधान निर्माणमा व्यस्त रहेका बेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्दथ्यो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन् ।
प्रमुख दलहरु नै भागवण्डा र स्वार्थको राजनीतिबाट माथि उठन नसकेपछि विपरीत परिणाम आउनु स्वाभाविक थियो । जसले जे भने पनि, राजनीतिक नेतृत्वको आँखा पुननिर्माणका लागि दाताको प्रतिवद्धतामा आउने धनमा नै थियो ।
पुननिर्माण कार्य प्रारम्भ भएको भए पनि संविधान त बन्ने नै थियो । त्यसो भएको भए जनताले संविधान र बास दुबै पाउने थिए ।
अहिले संविधान निर्माण भएर जारी भै सकेको छ । संविधानमा रहेको अल्पता र अस्पष्टताले यति धेरै समस्या जन्माएका छन् अहिलेसम्म संविधान क्रियाशील हुन सकेको छैन । देश निकै पछि परेको छ । मधेस आन्दोलन र त्यो आन्दोलनसँगै जोडिएर आएको भारतको अधोषित नाकाबन्दीले देशको आर्थिक अवस्था जीर्ण भएको छ ।
भूइँचालो पीडितहरुको प्रभावकारी उद्धार गर्न नसकेको आरोप लगाउने एमालेका अध्यक्ष अहिले आफैं प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनको ध्यान भूइँचालो पीडितको आँगनमा होइन, काठमाडौमा चल्ने रेलको कल्पनामा केन्द्रित छ ।
प्रधानमन्त्रीकै पालामा भूइँचालो पीडितहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । पीडितहरुलाई घर निर्माणका लागि चरणवद्ध रुपमा दुई लाख रुपियाँ अनुदान दिने सरकारी निर्णय अहिलेसम्म कागजमा सीमित छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय नै गर्न सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको दुई लाख रुपियाँले घर बन्छ भन्नु भ्रमको खेती गर्नुमात्र हो ।
गाउँका स्कूलहरु भत्किएका छन् । केटाकेटी पढ्न पाएका छैनन् । स्कूलको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन । भूइँचालोबाट अत्यधिक प्रभावित जिल्लाका कतिपय गाउँहरुमा पीडितहरुको पहिचानसम्म गरिएको छैन ।
पाउनुपर्ने कतिपय पीडितले अहिलेसम्म केही पाएका छैनन । गाउँ विकासका सचिवहरु यो वा त्यो बाहानामा सदरमुकाममा नै बस्ने गरेकाले सामान्य मानिस अप्ठेरो अवस्थामा छन् ।
अधिकांश भूइँचालो पीडितहरुको अवस्था नाजुक छ । तर, सरकारले भूइँचालोले ल्याएको अधिकांश भूइँचालो पीडितहरुको अवस्था नाजुक छ । तर, सरकारले भूइँचालोले ल्याएको विनास र विपद व्यवस्थापनको पूरै राजनीतिकरण गरेको छ । अहिले सरकारले दिने भनिएको ५० हजार रुपियाँको पहिलो किस्ता यही राजनीतिको उदाहरण हो ।
सरकारलाई राम्रो ज्ञान छ, पीडितले यो पैसाको उपयोग डीपीसी लेभलसम्म घरको जग उठाउन होइन, दैनिक उपभोगको खाद्यान्न किन्न खर्च गर्ने छन् ।
गाउँमा अन्नपात छैन । पोहोरको बाली भूइँचालोमा दबियो । अहिले बाली लगाउने अवस्था छैन । घर छैन, बाली कहाँ थन्क्याउने ? अधिकांश किसान रनभुल्ल परेका छन् । यसै पनि भूइँचालो पीडित जिल्लाहरु खडेरीको मारमा परेका छन् । पानीका मूल सुकेका छन् । जंगलमा डढेलो लागेको छ । भत्किएका घरका अवशेषहरु उठेका छैनन् । पूरै वातावरण बिथोलिएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले दिने दुईलाखको अनुदानले जनताले कसरी र कस्तो घर बनाउलान् ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ सरकार, प्राधिकरण र सरोकारवालाले खोज्नु पर्दछ ।जनताको मनस्थिति शिथिल छ । यतिवेला उनीहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको शिथिलतालाई कमजोरी ठान्दै आएको छ । तर, योे शिथिलता चर्को आक्रोशमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलधारमा रहेका पार्टीहरुले जनताको भावना मुखरित गर्न सकेनन् भने असन्तोषले अराजक स्वरुप लिन बेर लाग्दैन ।
भूइँचालोपछिको पुननिर्माण सरकारका लागि कडा चुनौति होे । सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति नभएसम्म सरकार एक्लैले यो चुनौतिको सामना गर्न सक्दैन । तर, उन्मादको अवस्थामा रहेको वर्तमान सरकार कसैसँग पनि सहमतिको मनस्थितिमा देखिएको छैन ।
(दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र लमजुङका भूकम्प पीडित वस्तीबाट फर्केर)